समाचार - Cavities: तिनीहरू के हुन् र हामी तिनीहरूलाई कसरी रोक्छौं?
एटी स्टिल युनिभर्सिटी - मिसुरी स्कूल दन्तचिकित्सा र मौखिक स्वास्थ्य
के तपाईंलाई थाहा छ दाँत इनेमेल मानव शरीरमा सबैभन्दा गार्‍हो पदार्थ हो? तामचीनी भनेको हाम्रो दाँतको बाहिरी सतह हो। हाम्रो मुखमा ब्याक्टेरियाले हामी खान्ने चिनीलाई एसिड बनाउन प्रयोग गर्दछ जसले यस सुरक्षात्मक तहलाई टाढा लगाउँदछ, गुहा बनाउने। एक पटक तामचीनी पनी गए पछि, यो फेरि हुदैन। यसैले तपाईंको दन्तचिकित्सक र दन्त दैवी hygienist ले तपाईंलाई सँधै फ्लोराइड टुथपेस्टले ब्रश गर्न र दाँत माझ्न भनिरहेका छन्! तपाईं गुहाको बारेमा र तिनीहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने बारे अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
गुफा भनेको के हो?
गुहा दाँतको प्वाल हुन्छ। प्रारम्भिक चरणको गुफाले सेता दाग जस्तो देखिन सक्छ, जसलाई निको पार्न सकिन्छ। समयको साथ, यो खैरो वा कालो दाग जस्तो देखिनेछ। Cavities सानो वा ठूलो हुन सक्छ। गुफा धेरै ठाउँहरूमा गठन गर्न सकिन्छ, तर ती प्राय: जसो तपाईं टोक्नुहुन्छ जहाँ दाँतको टुप्पोमा र तपाईंको दाँतहरूको बीचमा हुन्छ जहाँ खाना अड्किन्छ। तय नभएका गुफाहरूले संवेदनशीलता, पीडा, संक्रमण, र तपाईंको दाँत गुमाउन सक्ने बनाउन सक्छ। दाँतहरू राख्न र स्वस्थ राख्नको लागि उत्तम तरिका भनेको अनुहारहरू रोक्नु हो।
के गुहा कारणहरु?
के तपाईंको दाँतहरू खाना पछि “अस्पष्ट” महसुस गर्छन्? के तपाई याद गर्नुहुन्छ जब तपाई ब्रश र फ्लो गर्नुहुन्छ जब यो अस्पष्ट भावना टाढा जान्छ? जब हामी ब्याक्टेरिया र खाद्य पदार्थ ब्रश र फ्लस गर्दैनौं हामी निर्माण गर्छौं र प्लािक (प्लाक) भनिने एक टाँसिएको पदार्थ बनाउँदछौं।
दिनभरि, ब्याक्टेरियाहरूले हामीले खाने भोजनहरू खान्दछन्। जब हामी चिनी खान वा पिउँछौं, हाम्रो मुखमा ब्याक्टेरियाहरूले यसलाई बाँच्न र एसिड बनाउन प्रयोग गर्दछ। यो एसिड हाम्रो दाँतमा रहन्छ र दाँतको बाहिरी सतहमा आक्रमण गर्दछ। समयको अन्तरालमा, एसिडले हाम्रो दाँत थाल्छ, एउटा प्वालको कारण।
गुहा कसरी बनेको बुझ्नका लागि, दाँतले के बनाउँछ हेरौं। तामचीनी बाहिर कडा कभरिंग छ जसले हाम्रो दाँत सुरक्षा गर्छ। तामचीनी मुनिको डेन्टीन तल छ। डेन्टिन तामचीनी जत्तिकै गाह्रो छैन। यसले गुहालाई फैलाउन र ठूला हुन सजिलो बनाउँदछ। डेन्टिन मुनिको पल्प हुन्छ। लुगा त्यो हुन्छ जहाँ दाँतका लागि स्नायु र रगत आपूर्ति हुन्छ।
यदि कुनै गुहा फिक्स गरिएको छैन भने ब्याक्टेरियाहरूले तामचीनीबाट डेन्टिनसम्म यात्रा गर्न सक्दछन् र पल्पसम्म पुग्न सक्दछन्। यदि गुहाबाट ब्याक्टेरियाहरू पल्पमा छिर्छन् भने, यो संक्रमण हुन्छ।
दन्त संक्रमण गम्भीर र जीवन खतरा हुन सक्छ यदि उपचार नगरेमा। तपाईको दन्त चिकित्सकलाई तुरून्त हेर्नुहोस् यदि तपाईले निम्न मध्ये कुनै पाउनु भयो भने:
Your तपाईंको अनुहार वा मुखमा सूजन
Your तपाईंको मुखमा वा वरिपरि लालिमापन
Your तपाईंको मुखमा दुखाई
Your तपाईंको मुखमा नराम्रो स्वाद
खचाखचाहरूको लागि को खतरा छ?
बच्चाहरू, किशोर र वयस्कहरू सबै गुहाहरू पाउनका लागि जोखिममा हुन सक्छन्। तपाइँ बढेको जोखिममा हुन सक्नुहुन्छ यदि तपाइँ:
Between खाना बीच खाजा
Sug मिठो खाना र पेय खानुहोस्
C व्यक्तिगत र / वा गुहाको पारिवारिक इतिहास छ
Crack क्र्याक वा चिपडिएको दाँत छ
Dry औषधी लिनुहोस् जसले गर्दा मुख सुक्खा हुन्छ
Head टाउको वा घाँटी विकिरण थेरापी छ
गुहालाई कसरी उपचार गरिन्छ?
Cavities दन्त चिकित्सक द्वारा उपचार गरिनु पर्छ। दन्त चिकित्सकलाई गुफाहरू हेर्न प्रशिक्षण दिइन्छ। प्रारम्भिक चरणको गुफा फ्लोराइडको साथ मर्मत गर्न सकिन्छ। यदि गुहा गहिरो छ भने, दाँतको डाँडाको लागि मात्र डाँडा हो, यो गुफा हटाउन र चाँदी वा सेतो रंगको सामग्रीले क्षेत्र भर्न। यदि दाँतको ठूलो गुहा छ भने, यसलाई थप जटिल उपचारको आवश्यकता पर्न सक्छ।
म कसरी काभिलाहरूको जोखिम कम गर्न सक्छु?
Flu फ्लोराइडको साथ पानी पिउनुहोस्
Flu फ्लोराइड टुथपेस्टको साथ दिनमा २ पटक ब्रश गर्नुहोस्
Sug मिठो खाना र पेयबाट टाढा रहनुहोस्, जस्तै क्यान्डीहरू र सोडा। दिनभरि चुस्नुहोस् वा खान नखानुहोस्। यदि तपाइँ खान वा मिठो चीजहरू खाँदै हुनुहुन्छ भने खानाको समयमा यस्तो गर्नुहोस्।
Between खानाको बीचमा मीठा नाश्ताहरू सीमित गर्नुहोस्
Your तपाईंको दाँतको बीचमा दैनिक सफा गर्नुहोस्
Your तपाईको दन्त चिकित्सकको नियमित भ्रमण गर्नुहोस्
• सौंलेट पछाडिको दाँतमा राख्न सकिन्छ तिनीहरूलाई ब्याक्टेरियाहरूबाट ग्रुभमा गुहा बनाउनेबाट बचाउनको लागि।